12 Matanho eSocial Media Kushambadzira Kubudirira | Martech Zone
Ivo vanhu vari BIGEYE, yekugadzira masevhisi agency, vane isa pamwechete iyi infographic kubatsira makambani mukugadzira rakabudirira rezvenhau kushambadzira zano. Ini ndinonyatsoda kuputsika kwematanho asi ini ndinonzwirawo tsitsi kuti makambani mazhinji haana zvese zviwanikwa zvekutora zvido zveruzivo rwehukama. Kudzoka pakuvaka vateereri munharaunda uye kutyaira zviyero zvinowoneka zvebhizinesi zvinowanzo kutora nguva yakareba kupfuura kushivirira kwevatungamiriri mukati mekambani.
tsvakurudzo uye uzive vateereri vako, uchiratidza misoro uye zvido zvavanonyanya kufarira munharaunda.
Sarudza chete kushandisa manetwork uye mapuratifomu ayo anonyanya kutaura kune vateereri vako.
Taura yako key performance zviratidzo (KPIs). Chii iwe chaunoda kuti chako chemagariro kuedza kuita? Chii chinobudirira chinoratidzika senge mumashoko asinganzwisisike?
nyora bhuku renhau rezvenhau rekushambadzira. Iri bhuku rekutamba rinofanirwa kutsanangudza maKPIs ako, ma profiles evateereri, brand manas, pfungwa dzemushandirapamwe, zviitiko zvekusimudzira, makwikwi, zvinyorwa zvemukati, matanho ekugadzirisa matambudziko, nezvimwewo Cherekedza kuti zano rinofanira kuve rakasarudzika kuchikuva.
Gadzirisa nhengo dzekambani yako dzakatenderedza chirongwa. Govera mabasa ekuti ndiani arikutumira, ndiani ari kupindura, uye sei ari kuzivisa metric.
Tora maminetsi makumi matatu-30 pakutanga kwevhiki yega yega kana mwedzi kuronga tweets, Facebook zvinyorwa, LinkedIn zvinyorwa, mapini, kana zvimwe zvemagariro enhau. Aya anogona kuve ekutanga mazano, zvinongedzo kune rako basa, kana zvinongedzo kune zvekunze zvemukati zvinogona kubatsira kana kufarira vateereri vako.
sika bhanga remukati uchishandisa pepa rekushambadzira uye kuronga maringe nemusoro wenyaya, misoro yenyaya, zvinongedzo zvine hukama, kuronga kunodiwa, zita revanyori, uye nzvimbo yekutenderwa manejimendi pamutsetse wega wega.
Post zvine chekuita zvine chekuita nenyaya dzinokosheswa uye zviitiko nenzira yakakodzera. Izvo zvakakosha kuti ugovane pfungwa nekukurumidza panongotanga nhau dzinoitika.
Bata zvese nzanga nzira dzakasiyana. Iwe haufanire kunge uchitumira iwo iwo meseji kune ese mageru - rangarira kuti vateereri vari kuseri kwepuratifomu imwe.
Govera mumwe munhu kuita seyemutengi sevhisi rep kuva inoteerera kune inogadzirwa nevashandisi zvemukati uye negativity. Usaregeredza makomendi uye mhinduro!
Ronga kushuma! Zvichienderana nezvinangwa zvako, metric metrics inogona kuitika vhiki nevhiki, pamwedzi, kana pamwedzi.
Ongororazve hurongwa hwako nguva dzose. Kana chimwe chinhu chiri muchirongwa chako chisiri kushanda, chinja icho kana A / B bvunzo zvemukati kuti uone izvo vateereri vako vanopindura zvirinani.
Tags: vateereri profilesbigeyebrand manasdanidziro dzemushandirapamwezvemukati bhangizvinyorwa zvemukatimisoro yezvinyorwamakwikwimatanho ekugadzirisa matambudzikoMabatiro evatengiheadlineskey performance zviratidzokpiszviitiko zvekusimudzirahukama hwakabatanakuronganzira dzemagarirokushamwaridzana nevatengisocial media kuenderanasocial media channelspasocial media zvemukati bhangipasocial media vatengienhau midhiya KPIspasocial media networksocial media playbookpasocial media postmagariro enhausocial media researchsocial media kurongasocial media matanhozvemagariro vezvenhau zanomatanho